Biker maTatoo, chete kune akaomesesa | Kunyora
Biker maTatoo, chete kune akaomesesa
Mudhudhudhu, ingangoita isingagumi yakatwasuka, zuva nemhepo zvichipuruzira yako ma tatoo bhasikoro. Ndiani asina kumbofungidzira chiitiko ichi? Isu tave kukuvimbisa iwe kuti tine mamirioni enguva.
Saka tora doro, enda kugaraji uye gadzira Harley yako isingaparadzane, nhasi inguva yekutaura nezve yakanyanya kunetsa ma tatoo of bikers. Brum brum!
1 Vakaomesesa vanhu nyora?
2 Nguva itsva, tsika dzekare
Vakaomesesa vanhu nyora?
MaTattoos, kwete makore mazhinji apfuura, akasiyanisa vanhu vane njodzi kubva kuvanhu vakatendeseka… Zvakanaka, kana vakadaro. Pakati pevanhu vane njodzi tinogona kuverenga vakasungwa, mafia hitmen uye mabhasikoro. Uye dzakateedzana senge Vanakomana Anarchy Ivo havana kunyatso batsira kupfava iwo mufananidzo wevanhu vakaomarara umo mumwe nemumwe wavo aipfeka maTiktoo avo emabhasikoro.
Biker maTatoo anowanzo kuve nekuve nechimwe kana zvimwe zvinhu zvinotevera. Tine dehenya (inova yechinyakare), nyoka, makondo, shato, zvinhu zviri pamoto, dehenya nenyoka, makondo ane nyoka, dehenya pamoto, shato pamoto, dehenya pamoto nenyoka ... zvakanaka, ndizvo zvingave pfungwa. Uye akawedzera dehenya uye mamwe marimi ari nani. 😛
Nguva itsva, tsika dzekare
Asi zvinhu zvinochinja, izvo zvino maTattoos haashurirwe uye kune vanhu vazhinji vanotya kuwana maTattoo. Iwe hauchakwanise chete kungoita tattoo unopisa dehenya, nyoka, makondo kana shato kana iwe uchida midhudhudhu (kunyange iri sarudzo chaiyo inoshanda :)). Fungidziro yako ndiyo muganho, unogona kutora nyora pamudhudhudhu wako kana iwe uchifunga kuti ndirwo rudo rwehupenyu hwako (uye haufanire kunge uri Harley), inomhanyisa mota kana iwe uri fan yekumhanyisa, electrocardiogram mune chimiro chemudhudhudhu, cheni kana kunyange ngowani inogona kutaridzika seyeti biker.
Chii chaunofarira zvakanyanya nezve biker tattoos? Iwe unotakura chero? Usakanganwa kutisiira komendi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Body Art » Biker maTatoo, chete kune akaomesesa
Rudder tattoos: zvinoreva uye kuunganidzwa kwemadhizaini